नेपालको परिवेशमा अबको शिक्षा « News of Nepal
विश्वभर कोरोना भाइरसले पारेको विभिन्न प्रकृतिका प्रभावमध्ये शिक्षा क्षेत्रमा आफ्नै किसिमको अन्योलता छ । शिक्षा क्षेत्र धेरै भीडभाड र जमघट हुने ठाउँ हो । परिणामतः सरकारले रोकिएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) २०७६ लाई आन्तरिक मूल्याङ्कनबाटै सम्पन्न गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । वर्तमानमा भोगिरहेको अवस्था र आगामी दिनमा पनि आउन सक्ने सङ्कटअनुरूप शैक्षिक प्रविधिलाई कसरी विकास गर्ने भन्ने एउटा बहस शुरु भएको छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा भनिए जसरी नै मुलुकलाई इन्टरनेटको पहुँचमा विस्तार गर्ने कुरा प्राथमिकतामा राख्नु अबको बाध्यात्मक आवश्यकता बनेको छ । यदि यसो भएमा अनलाइन शिक्षाका विषयमा आज भएका बहस स्वतः व्यावहारिक बन्न पुग्छन् । यसका विपरीत अहिलेकै अवस्थामा नेपालको परिवेशलाई हेक्का नै नराखीपूर्वाधारविहीन अवस्थामा आएका विकल्प सबै निरर्थक हुने शङ्का पनि उत्तिकै छ ।
अनलाइन कक्षा: हात्तीको देखाउने दाँत
एसईई शुरु हुने दिनबाट नै बन्दाबन्दीको अवस्थापश्चात् ५ लाख बढी विद्यार्थी परीक्षाको पर्खाइमा रहेका छन् भने अन्य लाखाँै विद्यार्थी घरमा बस्न बाध्य छन् । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार ३५ हजारभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालय रहेका छन् । हालैको एउटा अध्ययनअनुसार तिनीहरूमध्ये ६ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयमा मात्र इन्टरनेटको सुविधा छ । सरकारको अघिल्लो वर्षको योजनाबमोजिम प्रायः माध्यमिक तहसम्म सञ्चालन भएका विद्यालयमा इन्टरनेट सञ्जाल जडान गरिएका छन् तर यहाँ विद्यालयमा भन्दा पनि कति घर–परिवारसँग इन्टरनेट छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ ।
ग्रामीण दूरदराजमा मोबाइलमा नेटवर्क नआएर डाँडातिर दगुर्नुुपर्छ । यसका लागि स्थानीय सरकारले उचित प्रबन्ध गर्न सक्छ । कतिपय ग्रामीण भेगमा सम्भव हुने भए गाउँलाई बन्द गराएर, आवतजावतको अवस्थालाई रोकेर विद्यालय खोल्न सकिएला पनि । इटालीको एउटा शहरले आफ्नो क्षेत्रमा कसैलाई आउन नदिने र बाहिर जान नदिने गरी सबैको स्वास्थ्य परीक्षण गरेजसरीव्यवस्था गरेमा केही सम्भव होला । अत्यन्तै विकट गाउँमा विद्यालय सञ्चालनमा समस्या नहोला तर यो पूर्ण जोखिमरहित र स्वस्थ वातावरणमैत्री हुनुपर्छ ।
दूरदराजको अवस्था र गरिबीको प्रताडनाका बाबजुद विद्यार्थी तथा अभिभावकमा मनोवैज्ञानिक असर देखिन थालेको पनि छ । भारत र नेपालमा पनि आत्महत्याका घटनालाई अनलाइन कक्षाको असरले बढायो भने त्यो गम्भीर विषय हो । शिक्षा प्रणालीलाई सुचारु गर्न सरकार, अभिभावक र विद्यार्थीले के कसरी भूमिका निर्वाह गर्न सक्लान् र स्थानअनुरूप कसरी विकल्पको छनोट गर्न थाल्ने भन्ने विषय अबको आवश्यकता हुनुपर्छ ।
विज्ञहरूले जे–जति विकल्प दिनुभए पनि यो शिक्षाभन्दा पनि बढी स्वास्थ्यमै गम्भीर हुनुपर्ने समय हो । जहाँसम्म एसईईलगायतका रोकिएका परीक्षाका बारेमा कुरा आइरहेका छन्, त्यो पनि भनिएजस्तो सहज देखिँदैन ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको प्राविधिक सहयोगमा टेलिभिजनबाट कक्षाहरू सञ्चालन त भइरहेका छन् तर टेलिभिजनको पहुँचमा आधाभन्दा बढी विद्यार्थी छैनन् । कतिपय विद्यार्थीसँग बन्दाबन्दीसँगै गाँउतिर छन् । इन्टरनेट छैन । इन्टरनेट चल्ने मोबाइल छैन अनि इन्टरनेट भएर पनि यो प्रविधिलाई चलाउने सीप छैन भने कसरी नेपालमा अनलाइन शिक्षा सम्भव हुन्छ र ? यो नेपालको वास्तविकता हो ।
यसर्थ सबैको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको यो तरिका हात्तीको देखाउने दाँत मात्र हुन्छ । हाम्रो नेपालमा घाँटी हेरी हाड निल्ने गरी योजना बन्नुको साटो देखावटीरूपमा मात्रै यो अनलाइन कक्षा सञ्चालन भएको देखिन्छ । जसले सञ्चालन गरिरहेका छन्, त्यहाँ पनि शतप्रतिशत सहभागिता रहेको देखिँदैन ।
यसले विद्यार्थी र अभिभावकमा अनावश्यक बोझ र तनावलाई प्रश्रय दिएको देखिन्छ । अनलाइन, टेलिभिजन शिक्षा प्रभावकारी प्रविधि त हो तर सीमित वर्ग, क्षेत्र र भूगोलमा मात्र आधारित हुँदा यसले लक्षित वर्ग समेट्न सक्दैन । फलतः हुनेखाने र हुँदा खानेको खाडल गहिरो बन्छ ।
विद्यालय खोल्नु कति जायज ?
सरकारले श्रावण २६ गतेदेखि ३२ गतेसम्ममा विद्यालय तथा कलेजहरू सञ्चालन गर्ने भन्ने चरणगत योजनालाई पेस गरेको छ । अहिले निजी विद्यालयहरूले स्कुलहरू खोलेर पढाइ सुचारु गर्ने कुरा गरिरहेकै अवस्थामा जिम्मेवार भएर मनोवैज्ञानिक र प्राविधिक समस्यालाई सोच्नु आवश्यक छ । तर, यी सबै योजना हाम्रो मुलुकको कोरोना सङ्क्रमणको अवस्थामा आधारित हुनेमा दुई मत छैन ।
चाहे विद्यालयमा सेनेटाइजर राखियोस्, माक्स लगाउन भनियोस्, या त थर्मल गन लगाएरै पठाउन भनियोस्, के जीवनको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने क्षमता कुनै विद्यालयसँग, कुनै व्यक्तिसँग छ ? यदि कुनै विद्यालयमा कोही विद्यार्थी सङ्क्रमित भयो भने त्यसको परिणाम कस्तो हुन्छ ? त्यसपछिको जिम्मेवार को हुन्छ ?
रुसोको अवधारणाले ‘प्रकृतितर्पm फर्क’ भन्ने मान्यता राख्छ ।यसरी हेर्दा शहरलाई प्राकृतिक परिवेशको समस्या हो भने गाउँमा अनलाइन कक्षाको कुरा समस्या हो । घरमा बसेर विद्यार्थीहरू बर्बाद भए मात्र भन्ने कि घरमा के–के सिके, स्वतन्त्र हुँदा संसारका के–के कुरा जाने–बुझे भन्ने विषय प्रमुख हो ।
हामी एकातिर विद्यालयको चौघेराको शिक्षा मात्रै सर्वोपरि होइन भन्दै छौँ, अर्कोतिर बाह्रै महिनाको बाह्रै घण्टा विद्यालयभित्र कोच्याएर सिकाउनुपर्छ भन्ने अडानबाट हट्न हिच्किचाउँदै पनि छौँ । अब शिक्षामा सोच र तरिका दुवै बदल्नु पनि आवश्यक छ । अब जहाँ जे छ,त्यही स्थानीय आवश्यकताका आधारमा शिक्षालाई जोड्नु बुद्धिमानी हुन्छ । यो कार्यलाई गाउँपालिकास्तरीय विकासको योजनामा गाँस्न सकिन्छ ।
अर्को कोणबाट हेरौँ, सामाजिक दूरी कायम गरेर विद्यालय खोल्नुपर्छ भन्ने बहस कति सान्दर्भिक छ ?कोभिड–१९ महामारी उत्कर्षमा पुगेको बेला निजी विद्यालय सञ्चालकहरूलाई स्कुल खुलाउन हतारो हुनुका पछाडि आर्थिक मेसो टार्ने प्रपञ्च मात्रै हो ।विद्यालय तथा कलेजलाई अन्तिम अवस्थामा मात्रै खोल्नुपर्छ भन्ने कुरा नै जायज हुन्छ ।
हाम्रो पहिलो आवश्यकता के हो ?ज्ञान सिक्नलाई जोखिम मोल्ने किबाँचेपछि ज्ञान सिक्ने ?पहिलो कुरा त अभिभावकले कसरी आफ्ना छोराछोरीलाई विद्यालय पठाऊलान्? दोस्रो, यदि विद्यार्थी विद्यालयमा गइहाले भने पनि उनीहरुचञ्चल हुन्छन् । कक्षामा सामाजिक दूरी कायम गरेर पढाउने कुरा त ‘स्वतन्त्र चरीलाई पिँजडामा बन्द गरेर खुशी छ’ भन्नु जस्तो मात्रै हुन्छ ।
बरु विद्यार्थीको हात–हातमा पुस्तक पु¥याउनुपर्छ भनेर गाउँपालिका, वडास्तरीय सक्रियता बढाऔँ । घर–घरायसी काम सिकाउने तरिकालाई खोजौँ । अहिलेको देखिएको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको इन्टरनेटको पहुँच नभएका क्षेत्र र विपन्न वर्गका परिवारमा नै हो । त्यसो भए यतिखेर सकेसम्म सामाजिक संस्कार र पारिवारिक भाइचाराका सन्देश पढाऔँ । अग्रजका अनुभवमा रम्न सिकाऔँ । हजुरबाबाट नातिले सिक्ने हिजोको ज्ञानको पुस्तान्तरणको आदतको जनचेतना जगाऔँ ।
घरका कुरा सिकाऔँ
अनलाइन कक्षाले राज्य साझा हो भन्ने अवधारणामा समेत प्रश्न उठाउनेछ । यसबाट इन्टरनेटको पहुँच भित्र र बाहिर डिजिटल प्रयोग गर्ने र नगर्ने बीचको वर्ग, समुदाय, क्षेत्र र भूगोलमा बस्नेहरूको बीचको नतिजामा समेत फरक उपलब्धि आउँदा दीर्घकालीन असर रहने देखिन्छ । विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट जनचेतना अभिवृद्धि गरी सोचाइमा थोरै भए पनि सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हुन सक्छ । यसबाट बालमस्तिष्कमा थोरै भए पनि कोरोनाको त्रास कम हुन सक्छ । बरु यो समयलाई बालबालिकाले उनीहरूको जीवनमा गरेर खान सक्षम बनाउने तथा गुणात्मक विकास गर्ने गरी उपयोग गर्नु बढी प्रभावकारी हुन सक्छ । यसअन्तर्गत निम्न कार्य गराउन सकिन्छ
बालबालिकालाई घरको काम सिक्न अभिप्रेरित गर्ने
खाना पकाउनेदेखि कृषिजन्य क्रियाकलापमा संलग्न गराउने
कृषिमा प्रयोग हुने उपयोगी सामग्रीहरूको निर्माणमा उत्प्रेरित गर्ने
खेतबारीदेखि करेसाबारीसम्ममा रमेर सिर्जनात्मक काम गर्न लगाउने
गाईबस्नु चराउन, घाँस–दाउराको जीवनसमेतको ज्ञानमा भिजाएर प्रकृतिलाई माया र सम्मान गर्न उत्प्रेरित गर्ने
आफ्नो चाडपर्व, धर्म, भाषा, संस्कृति, भेषभूषा आदिको सम्मान गर्न सिकाउने
विद्यालयबाट सिक्ने शिक्षा मात्र पूर्ण ज्ञान नभएर जीवनबाट प्राप्त गरिने ज्ञान, सीप, व्यवहार, राम्रो आनीबानीलगायत सबै सिकाइलाई शिक्षासँग सामीप्य गराउने
आयुर्वेदजन्य औषधिज्ञानको शिक्षा सिकाउने आदि ।
कोरोना महामारीको असर कतिसम्म पर्छ भन्ने कुनै यकिन हुन नसक्दा विशेष गरेर स्नातकोत्तर तह र सोभन्दा माथिका लागि अनलाइन कक्षा एउटा विकल्प हुन सक्छ । स्नातक तथा माध्यमिक तहसम्मलाई रेडियो शिक्षा बढी प्रभावकारी हुन सक्ला । साना कक्षाका विद्यार्थीका लागि अहिले अभिभावक पनि घरमा हुनुहुन्छ र विद्यार्थी पनि घरमै छन् । उनीहरूलाई त घरमै सिकाउन–पढाउन सकिन्छ ।
हिजोको शिक्षामा हजुरबाले धूलो माटोलाई पिरामा राखेर छेस्काले क–ख, क–का, अ–आ, १–२ आदि आधारभूत कुरा सिकाइसकेपछि विद्यालय जाने चलन थियो भने आज यो कुरालाई किन नअपनाउने ? यो सम्भव पनि त छ । बालबच्चात प्रायः कार्टुनमै झुम्मिरहन्छन् । अब नेपाल सरकारले उपयोगी सन्देशप्रद कार्टुनलाई मात्रै युट्युबमा राख्ने गरी प्रबन्ध गरे कमसेकम बालबच्चाले आँखा बिगार्ने थिएनन् कि भन्ने पनि हो ।
अहिले आधारभूत तह (१–८) मा मात्रै नभएर माध्यमिक (९–१२) का विद्यार्थीहरू पनि पढाइ सीपमा कमजोर देखिन्छन् । बरु यी स्तरका विद्यार्थीलाई अभिभावक र शिक्षकको समन्वयबाट पठन–सीपमा अभ्यस्त बनाउने अभियान चलाउने हो भने यो एउटा राम्रो आधार हुन सक्ला । विद्यार्थीको आफ्नो रुचि र क्षमताअनुरूप कलात्मक अनि अन्तर्निहित क्षमतालाई भरपूररूपमा बाहिर निकाल्नुपर्ने समय हो । यस अवस्थामा इन्टरनेटको पहुँचमा हुनेहरूले मोबाइल र युट्युबबाट सकारात्मक कुरा सिकून् भनेर प्रेरित गर्न सकिन्छ ।